Amanyathelo amancinci okufumana imali enkulu.
Unokwenza i-wallet yakho ibe yimbi, ungayiziphi na into! Sebenzisa imali ngokuthenga enye! Nazi iindlela ezilula ukuba mhlawumbi ungasolisi, kwaye oku kuya kunceda ukugcina encinci ngomvuzo omncinci.
Ukugcina imali ngomsila, kwanele ukwenza izinto eziqhelekileyo ngokuthe ngqo. Impumelelo nganye kwimeko encinci, kodwa, ngokubanzi, inani elimangalisayo lifumaneka.
Ngaphambi kokuba uthenge, thelekisa amanani.
Ngenxa yoko, akufuneki ukuba ugijime kuzo zonke iivenkile, vele ungene kwelinye uze ukhethe, umzekelo, umzekelo ofanelekileyo wefriji. Bhala phantsi inombolo yomzekelo, kwaye ufumane ukunikezwa okuncinci ekhaya nge-intanethi (nje ungahendwa yinto ephantsi kunazo zonke, ngokuqhelekileyo zibuhlungu). Unokuqhathanisa isethi yemisebenzi kwiimodeli ezahlukeneyo.
Winnings: 10% okanye ngaphezulu kwexabiso lokuthenga.
Ibhonasi: wenza umyalelo kwisayithi - kwaye akukho mnye ukuhamba komzimba: izinto ziya kuziswa ekhaya ngexesha elivunyelweneyo.
Vula i-autopilot kwibhankini yakho.
Buza ibhanki ukuba idlulise ngokuzenzekelayo kwi-akhawunti yakho yomvuzo inani elithile kwidiphozithi.
Ukuphumelela: kuxhomekeke ekubeni unquma kangakanani ukugcina, ngokufanelekileyo - 20% yemali.
Ibhonasi: i-akhawunti iya kukhula ngokwayo, uya kubona ezi ziphumo.
Xa kunjalo, qhubeka uhlola.
Kwiiveki ezimbini emva kokuthenga. Ngaphantsi komthetho "kumaLungelo aBathengi" unelungelo lokubuyisela into, nangona akukuthandi, kunye nenento ephosakeleyo-ngexesha lewaranti. Ewe, ukwenza njalo, kufuneka uhlale ungasetyenziswa. Isitoreji siya kukubuyisela kuwe ukuba idilesi ikhuselekile.
Winnings: indleko zezinto ezingadingekile kuwe.
Ibhonasi: ayikho ibhola elilenga kwikhefu iminyaka!
I-100% ithengwa ngexabiso lentengo: uthenge kwi-intengiso.
Eli lixesha elihle lokuthenga izipho kubahlobo kwiinyanga ezintandathu ezizayo kwaye wenze isiseko se-wardrobe yakho.
Ukuphumelela: ukusindisa ukususela kwi-10 ukuya kwi-75% yeendleko zokuthenga.
Ibhonasi: ngethuba lokuthengwa ngokugqithiseleyo kukulungele ukhethe iibhola ukuze zihambisane nezicathulo kwisikhwama: unokuthenga yonke into kanye!
Ungathembeli ukuba ungabonakali, kodwa umgangatho.
Amashishini amaninzi athengisa, ngaphezu kwezinto eziphambeneyo, iimveliso phantsi kohlobo lwazo, kwaye zingabizi. Ngomgangatho wobisi okanye ibhotela, lo mmahluko awubonakali!
Ukunqoba: ukusindisa i-10-20% yeendleko zemveliso.
Ibhonasi: musa ukuthelekisa itekisi yentengo: i-macaroni esincinci isoloko ibhalwe njengomgcini.
Masiyeke umhlala-mveliso wokucoca ngokucoca ngokukhetha umatshini wokubhala.
Ukukhetha ukuba yiyiphi ingubo yokuthenga, khangela iilebula kunye namanqaku ekushiya: ngaba unokuhlamba kumatshini wokubhala? Kwaye ukuba zombini izinto zivusa uvelwano olufanayo kuwe, khetha i-styrene. Yonke inyulo yokucoca ngokumileyo inkulu, ngokuqinisekileyo, awuyi kuthi igama. Kodwa ukuba i-skirt ixabisa i-100,000 ihlambuluke kwisicoco esicoca ilishumi, cinga, uthenge amawaka angama-200.
I-Winnings: ukusindisa i-10,000 - 200,000 ngamawaka ezintandathu.
Ibhonasi: awudingi ukuhamba kwindawo yokucoca. Yenza i-careled imoto - kwaye ingekho ingxaki!
Sisoloko sichitha ixesha elingaphezu kwexesha elidlulileyo: ngokuqhelekileyo sichitha malunga nemali engama-70%. Ukuthelekisa: abathengi baseNtshona bachitha kuphela 40%.
Kwakhona kukho amakhadi esaphulelo kwiivenkile ezininzi, ukusuka kwi-10 ukuya kwi-15%. Le mali ingagcinwa kwimvulophu kwaye isetyenziswe kwinto efanelekileyo kuwe.
Buyisela imali yakho.
Unokubuyela emva malunga ne-13% yemali esetyenziselwe uqeqesho, unyango okanye ukuthengwa kwezindlu. Ibizwa ngokuba yerhafu yokuncitshiswa. Ewe, le mali ayiyi kunikwa yona ngemali. Kuphela nje ukuba irhafu yakho yengeniso ayinakuthathwa kumvuzo wakho de uze uhlawulelwe yinani lonke lokuncitshiswa.
Ukuze uyifumane, ufuna:
Ukuqokelela kwiikliniki okanye kumaphepha aseyunivesithi ukuhlolwa kweerhafu.
Hambisa isimemezelo sentela esekelwe kwiziphumo zonyaka. Futhi usebenzise kwindawo osebenza kuyo.
Iinkcukacha ze-Mozzarella ushizi
Imigaqo yokunyamekela izicathulo ze-suede
UCesare ugqoke kwi-avocado
Amehlo yintsana - ifestile kwihlabathi!
I-recipe ye-recipe yokulungiselela i-goose nama-apula kunye neziqwenga ze-prunes
Ziziphi izitofu ezifunekayo kumntwana kwi-kindergarten?
Yintoni endiyenzayo xa ndihlambulula ubuso bam?
Indlela yokuphilisa ukukhwehlela komntwana omncinci
Unyango kunye neoli yetiyi
I-bran ye-Oat: isikhali esihle kakhulu sokulwa nokukhuluphala
Amaski asekhaya asebenzayo ngokukhula kweenwele ezikhawulezayo
Izikhonkwane zobuxoki - incwadana yokufundisa ngokwabo
Imveliso yokunyuka kwebele